Part 1: Gịnị bụ a RTMP faịlụ?
Part 2: Olee otú Play RTMP Files na a VLC Media Player on Windows?
Part 3: Olee Play RTMP Files na a VLC Media Player on Mac?
Part 4: Gịnị mere VLC apụghị egwu ụfọdụ RTMP faịlụ?
RTMP, nke anọchi Real Time Media Protocol, bụ faịlụ extensions ji site Macromedia Flash. N'ezie, mgbe anyị na-amaba miri n'ime zụlite anyị, anyị ga-ahụ na Real-Time Izi ozi Protocol (RTMP) n'ezie na e mere maka elu-arụmọrụ nnyefe nke video, ọdịyo na data n'etiti Adobe Flash Platform teknụzụ, gụnyere Adobe Flash Player na Adobe AIR.
Otú ọ dị, RTMP dị ugbu a dị ka onye na-emeghe nkọwapụta iji ike ngwaahịa na nkà na ụzụ na otú nwee nnyefe nke audio, video na data na-emeghe AMF, SWF, FLV, na F4V formats. Dị ka nke ugbu a, VLC Media Player 2.1 na n'elu nwere ele mmadụ anya n'ihu nkwado maka egwu na-akpọ RTMP iyi (bụghị RTMPE), mgbe Adobe Flash Player (web nkwụnye ihe nchọgharị) bụ nke ihe ka ọtụtụ nakweere RTMP ahịa, nke na-akwado playback nke ọdịyo na video streamed si RTMP sava.
N'ezie, VLC Player, bụ mgbe e mere, enweghị ikike na-egwu RTMP Files. N'ihi na version ruo 1.1 ma ọ bụ ihe VLC Player bụ enweghị ike igwu egwu RTMP Files. Ma, mgbe ọhụrụ version batara ahịa, VLC Player gụnyere na-egwu ndị a RTMP Files.
Na-adịbeghị anya nsụgharị nke a kasị eji ọkpụkpọ, bụ ike ezu na-egwu dị iche iche formats nke faịlụ na ike mfe enuba ndị a Macromedia RTMP Flash protocol faịlụ. Na dị nnọọ ozi nke URL, na VLC Player pụrụ ịbụ nnọọ irè eji maka nzube nke na-akpọ RTMP Files. Ị nwere iji Network iyi maka otu nzube.
Open VLC, Pịa na menu nhọrọ dị na n'aka-ekpe n'akụkụ.
Lee ndị nzọụkwụ, maka kwesịrị ekwesị na-agba ọsọ nke RTMP Files na VLC Media Player on windows.
Wee pịa na Open Network Stream, na mgbe ahụ Tapawa URL nke video ị chọrọ igwu on VLC Media Player.
The textbox akọwa otu dị, nke egosi n'ụzọ doro anya "Biko tinye a netwọk URL" nhọrọ.
Wee pịa na Play bọtịnụ na ị na-eme. Enwe gị video na VLC Player.
The snapshots akọwa otu ike ga-eji na-amụta otu ihe ahụ.
Nkebi nke 3: Olee otú iji Play RTMP Files na a VLC Media Player on Mac?
Otu usoro dị ka e kwuru Windows ngalaba na-aga na na Mac. Na otu usoro, VLC Player nwere ike sued na-egwu RTMP faịlụ ma ọ bụ RTSP Files. Dị pịa na gụgharia nhọrọ ugbu ke Media menu. Mgbe ahụ faịlụ ngalaba ga-egosi ebe ị chọrọ ka ịgbakwunye faịlụ. N'elu-agbakwunye faịlụ, ị na-chọrọ tinye netwọk URL, ugbu a na-esote nhọrọ na n'elu-agbakwunye a na netwọk URL, pịa iyi akụkụ. Ị na-eme na usoro ị ga-ahụ gị faịlụ na-agba ọsọ VLC Media Player na Mac. Usoro maka ebre bụ otu ihe ahụ dị na windo.
Nkebi nke 4: Gịnị VLC apụghị egwu ụfọdụ RTMP faịlụ?
E nwere ụfọdụ, mgbe RTMP Files adịghị egwu na-VLC Media Player. E nwere ike m ụfọdụ doro anya ihe mere otu ihe ahụ, na n'etiti ha mkpa maka kwesịrị ekwesị codec ọmụma bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa n'anya. Mgbe ụfọdụ, n'ihi na netwọk gụgharia njehie, ị pụrụ iche ihe isi ike na-akpọ RTMP File. Ọ bụrụ na, na izo ya ezo na-adịghị nyeere na iyi, usoro nke ebre nke faịlụ bụ ekwe omume ọbụna na VLC Media Player. Mgbe ụfọdụ, ndakọrịta okwu ndị dị nnọọ ihe ọzọ mere ụfọdụ RTMP Files na-egwu na VLC Media Player. Tinyere ihe ndị a Nyocha mbipụta na nche mbipụta n'oge usoro nke gụgharia bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị ọzọ maka otu. Clients Mmachibido na ọbụna na-ezighị URL Feed bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị mere maka incapability nke VLC Player na-agba ọsọ ahụ RTMP Files.
Ọ bụrụ na, e nwere ụfọdụ faịlụ, nke ọbụna mgbe nza nke mgbalị adịghị na na na VLC Player, ọ bụ oge iji Wondershare Video Converter Ultimate bụ a kasị mma VLC nnyemaaka. The ngwá ọrụ, ike ga-eji maka enyemaka dị ukwuu akakabarede usoro. Site n'ịtụgharị faịlụ site otu ụdị ọzọ, faịlụ pụrụ n'ụzọ dị mfe na-egwuri na VLC Player. Dabere na oke nke mmepụta faịlụ Ọkpụkpọ, ị nwere ike mfe tọghata faịlụ na n'agbanyeghị nke oge, ma na-faịlụ-agba ọsọ na Windows ma ọ bụ na Mac.
Usoro nke akakabarede nke faịlụ na-amalite na oke nke faịlụ nke na ị na-converting. Mgbe ahụ oke nke mmepụta faịlụ ụdị bụ ka a mere site na dobe ala menu. N'elu na-eme ka nhọrọ, anyị nwere ike ịchọta tọghatara menu, dị nnọọ na ala n'aka nri n'akụkụ nke Wondershare Video Converter Ultimate interface. Site na ịpị na menu, usoro nke akakabarede amalite na n'oge na-adịghị, usoro Nwela dechara. N'elu ẹkụre, faịlụ pụrụ n'ụzọ dị mfe na-egwuri na VLC Media Player.
Wondershare Bụ kacha ngwá ọrụ, nke na-enyere mmadụ nọ ebe nile akụkụ nke video akakabarede na ịhụ dịgasị iche iche nke nhọrọ nke faịlụ formats, na ngwá ọrụ ike-atụle ka otu n'ime ndị kasị zuru ebe nile n'etiti ndị niile na otu genre.
Ya mere, ọ bụrụ na, ị na-eche ihu nsogbu na RTMP File bụghị egwu na VLC Player, dị nnọọ na-enyemaka nke nhọrọ dịgasị iche iche awa site Wondershare Video Converter Ultimate, nke tumadi eje ozi dị ka oké VLC nnyemaaka.
> Resource> VLC> Olee otú iji Play RTMP Files na a VLC Media Player?